ကြည်ကြည်ရဲ့ဒိုင်ယာရီ: ကန်ဆိုင်းက အစားအစာများ (kansai အစားအစာ)
Posted by ကြည်ကြည် at 4:27 PM
1st time i visited your blog. Thanks for sharing your food.
ညိမ်းနိုင် September 10, 2011 at 10:18 PM
ချဉ်ဖတ်ကတော့ ဘာချဉ်ဖတ်မှကိုမကြိုက်တာ အစ်မရာ...၊ဒါပေမယ့် ရေဘဝဲ
ထာပနာ ထား.တဲ့ အလုံးလေးတွေတော့စားချင်သား......
Anonymous September 10, 2011 at 10:39 PM
တို့များတော့ ဆန်ဆေးရည်အကြည်ထဲ မုန်လာဥလေးလှီးပြီးထည့်လိုက်
၃ရက်လောက်နေ စားလို့ရရေား)
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! September 10, 2011 at 11:00 PM
စားချင်စရာလေးတွေ ..စားချင်တယ်ဆို..ဟင့် ..:):)
Anonymous September 10, 2011 at 11:36 PM
Me too, I don't like takoyaki and ထိုးမုန့်၊လမုန့် .
Kyaw Hnin Se Lwin September 11, 2011 at 3:18 AM
စိတ်ထဲမှာအားမရဘူး အရသာကပေါ့လို့ :)))
Tun Tun September 11, 2011 at 7:01 AM
မန္တလေးက အစား မဟုတ်ဘူးလား။ အဲလိုပဲ ကြားဖူးလို.း)
Anonymous September 11, 2011 at 11:30 PM
အစ်မရေ ပထမဆုံးအကြိမ်လာလည်ပါတယ်။ အမြဲလာလည်တော့မယ်နော်။ အစ်မကလဲ ဂျပန်စာတွေ မကြိုက်တာတွေချည်းပါပဲလား။ ချဉ်ဖက်ဆို မုန်လာချဉ်ပဲကြိုက်တယ်။
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) September 11, 2011 at 11:49 PM
မီဆိုအနှစ်က ဘယ်လိုအရသာရှိမှန်းမိသိသေးလို့ အဲဒါလည်းစားချင်တယ်
Shinlay September 12, 2011 at 9:24 AM
မစားဖူးသေးတာတွေ စမ်းစားကြည့်ချင်ပါတယ်။ ချဉ်ပတ်ဆိုကြိုက်ပါတယ်။
မဒမ်ကိုး September 12, 2011 at 11:49 PM
တာပန်ရာကီနဲ့ ဆူရှီပဲလိုက်တယ်း)
နေမကောင်းပါဘူးဆိုမှ စားစရာတွေချည်းတင်နေကြတာပဲး(